Global Voices teny Malagasy » Fantaro I Fish, Mponina Ao Amin’ny Tobim-Pialokalofana Lehibe Indrindra Eto An-Tany · Global Voices teny Malagasy » Print
Fantaro I Fish, Mponina Ao Amin'ny Tobim-Pialokalofana Lehibe Indrindra Eto An-Tany
Voadika ny 21 Febroary 2016 9:42 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Somalia, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana
Abdullah Hassan, fantatra amin'ny anaram-bositra hoe Fish, dia monina ao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Dadaab ao Kenya nandritra ny 23 taona. Sary: Abdullah Hassan/Courtesy
Ity lahatsoratra nosoratan'i Rachel Gotbaum  ho an'ny The World  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 18 Febroary 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
7 taona i Abdullah Hassan, manana anaram-bositra hoe Fish (trondro) raha novonoin'ireo milisy tao Somalia ny rainy. Nandao an'i Somalia izy avy eo ary nankany Kenya, tao Dadaab, tobin'ny mpitsoa-ponenana.
Namoy ny ainy teny an-dalana noho ny tsy fahampian-tsakafo ny roa tamin'ireo rahalahin'i Hassan sy ny anabaviny. Raha tonga tao amin'ny toby izy ny reniny, tsy dia tsara ny fepetra tao.
Natsangana tamin'ny taona 1992 ny toby hampiatranoana Somaliana mpitsoa-ponenana 90.000 mandositra ny ady an-trano.
Hatramin'izao, zara raha misy fantson-drano na rano mandeha, ary matetika manapaka ireo anjara sakafo efa kely ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoa-ponenana. Mpitsoa-ponenana maro no matin'ny hanoanana. Misy ihany koa ny valan'aretina Kôlera noho ny tondra-drano goavana sy tsy fahampian'ny rafi-panadiovana.
Namoy ny ainy noho ny vay vokatry ny tsy fahampian'ny fitsaboana tokony ho sahaza ho azy ny vadin'i Fish.
Sokajiana ho asa an-tsitrapo ny asan'i Fish miaraka amin'ny Vaomieran'ny Mpitsoa-ponenana Danoà noho ny sata maha-mpitsoaponenana azy. Sary: Abdullah Hassan/Courtesy
Tsy mahazo miasa ny mpitsoa-ponenana ary tena vitsy ireo mahazo mandao ny toerana. Miasa ho an'ny Vaomieran'ny Mpitsoa-ponenana Danoà i Fish, saingy tsy asa amin'ny heviny mahazatra izany: manome vola kely ho an'i Fish ny sampana ary manasokajy azy toy ny mpilatsaka an-tsitrapo.
Mampiantrano olona 500.000 ankehtriny ny toby Dadaab ary tanàna rava manana ny haben ‘ny New Orleans.
Vao haingana ny vondrona milisy Al Shabaab no nitsofoka tao amin'ny toby.
“Efa niainanay ny hetsika feno herisetra goavana, fakàna an-keriny, fifampitifirana, famonoana, nisy ireo fiara marobe nodarohana baomba,”, hoy i Hassan. “Namoy ny ainy ny mpiara-miasa amiko ao amin'ny fiarahamonina.”
Efa lasibatra ihany koa i Fish ary voatery nandao [ny toby] ho any Nairobi, ka monina ao amin'ny fomba tsy ara-dalàna izy amin'izao fotoana izao. Matetika izy sakanan'ny polisy ary tsy maintsy manome kolikoly azy ireo mba hialàna amin'ny fisamborana.
Rehefa nahatsapa fa voafandrika tao Dadaab sy tany Kenya nandritra ny 23 taona i Fish dia manantena hanorim-ponenana any amin'ny toeran-kafa tsy mitsanga-ko fahavalo, any no hiara-monina amin'ireo zanany vavy, izay mbola monina ao an-toby. Manantena hanangana fiainam-baovao izy.
“Be fanantenana aho fa ho afa-miala eto Kenya ary hanorim-ponenana any an-kafa,” hoy izy. “Fotoana sisa fa manana vahaolana ho ahy Andriamanitra.”
Tantaraina ao amin'ny boky vaovao “City of Thorns” nosoratan'i Ben Rawlence i Fish. Ato raha hamaky bebe kokoa momba izany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/21/79420/
 Ato raha hamaky bebe kokoa momba izany: http://www.pri.org/stories/2016-02-13/new-book-looks-life-world-s-largest-refugee-camp